"Ary nony nahita Azy nitsangantsangana tambonin’ny ranomasina ny mpianatra, dia raiki-tahotra ka nanao hoe : Matoatoa io ; dia niantso izy noho ny tahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin’izay hoe : Matokia, fa Izaho ihany, aza matahotra. " Matio 14:26-27
Tsara vakiana: Matio 14:22-36
“Raha tojo fitsapana tsy azo ialana isika, indray andro any, dia aoka hahatsiaro izao: Jesosy dia nanome baiko antsika hiondrana ka hita eo alohany “ho eny ampita”. Tsy dia fahita tokoa mantsy ny ho tonga eny ampita, ho an’izay tsy mahazaka ny famelezan’ny onjan-drano sy ny fanoheran’ny rivotra. Koa rehefa voahodidin’ny zava-manahirana maro sy mafy isika, ary reraky ny milomano ao anatin’izany kanefa tsy ampy fitaovana, dia alaivo an-tsaina fa eo afovoan’ny ranomasina ny sambokelintsika, ahilangilan’ny onja izay te hahita antsika ho “toy ny olona vaky sambo… ny amin’ny finoana” (jereo 1 Timoty 1:19).
Rehefa tojo ireny fijaliana ireny àry isika, ka tsy rendrika nandritra ireo ora maro nisian’ny alina maizina manjaka ao anaty fotoanan’ny fitsapana, rehefa niady mba tsy ho vaky sambo ny amin’ny finoana, aoka hatoky fa, rehefa ho lasa ny alina ka ho tonga ny maraina (Romana 13:12), dia ho avy eo anilantsika Ilay Zanak’Andriamanitra, mandeha eny ambony rano, mba hampitony ny ranomasina.
Rehefa hahita Azy isika dia hisarita-tsaina, mandra-pahatongan’ny fotoana hahatakarantsika mazava fa ny Mpamonjy io. Hitony ny rivotra; koa rehefa takatsika ny haben’ny loza saika nahavoa antsika, dia hitsaoka an’i Jesosy isika, ka hiteny hoe: "Tena Zanak’Andriamanitra tokoa Ianao.”